You are a company looking for Executive profiles in the Construction field in Zimbabwe?
AfricaWork Executive Search proposes to you Construction Executives working in different top management positions in Zimbabwe. Contact us and benefit from our expertise in the recruitment of Construction Executives in Zimbabwe.
You are a Construction Executive looking for a top management position in Zimbabwe? You have a solid experience in Construction Management. Post your CV on Zimbajob.com, a site of AfricaWork, to be contacted by our recruitment agency for a Construction Executive position in Zimbabwe.
construction executives Zimbabwe
Construction Executive Zimbabwe N°00027818